Iyo nyowani vhezheni yeApache OpenMeetings 6.0 web conferencing server yakaburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeApache OpenMeetings 6.0 web conferencing server yakaburitswa
Darkcrizt | | Updated on 24/03/2021 19:13 | Free Software
La Apache Software Foundation yakazivisa kuburitswa kwe iyo nyowani vhezheni yewebhu musangano musangano "Apache OpenMeetings 6.0" iyo inogonesa webhu-based odhiyo uye vhidhiyo musangano, kubatana pamwe nekutumira mameseji pakati pevapowo, pamwe nemaviri mawebhusaiti ane mutauri mumwe chete uye misangano ine huwandu hwevamiriri vevatori vechikamu vanofambidzana vanotsigirwa. Iyo kodhi yeprojekiti yakanyorwa muJava uye inogoverwa pasi peiyo Apache 2.0 rezinesi.
Zvimwe zvinowedzerwa zvinosanganisira: maturusi ekubatanidza neyekarenda scheduler, kutumira munhu kana kutepfenyura makadhi uye notisi, govera mafaera uye zvinyorwa, chengeta vatori vechikamu 'kero bhuku, chengeta chiitiko, pamwe chete kuronga mabasa, kutepfenyura mhedzisiro yekushandisa manyorerwo (screencast demo ), Kuita ongororo uye sarudzo.
Imwe sevha inogona kushandira inopokana nhamba yemisangano inoitirwa mumakamuri akaparadzana emusangano uye kusanganisira yako seti yevatori vechikamu. Seva inotsigira inoshanduka mvumo manejimendi manejimendi uye ine simba musangano kuenzanisa system. Iwo manejimendi uye kudyidzana kwevatori vechikamu kunoitwa kuburikidza newebhu interface. Iyo OpenMeetings kodhi yakanyorwa muJava. MySQL uye PostgreSQL inogona kushandiswa seDBMS.
1 Main nyowani maficha eOverMeetings 6.0
2 Ungawana sei Apache OpenMeetings 6.0?
Main nyowani maficha eOverMeetings 6.0
Mune iyi vhezheni nyowani, kuwedzera kune kumwe kugadziriswa uye kugadzirisa, uye angangoita makumi mana matambudziko achagadziriswa, pakati pezvakakurumbira zvitsva zvinomira, tinogona kuwana izvo akawedzera kugona kumhanyisa bvunzo uye kuburitsa metric kuteedzera mashandisiro uchishandisa iyo Prometheus yekutarisa system.
Uyewo shanduko dzakaitwa kugadzirisa kusimudzira kwekuteerera nemavhidhiyo musangano wehurukuro, pamwe chete kubvumidza kugovana skrini uchishandisa tekinoroji yeWebRTC. YeOAuth, iyo TLS 1.2 protocol inosanganisirwa.
Kune rimwe divi, zvinotaurwa izvo akawedzera kugona kuseta miganho yeNetTest mutengi (yekukurukurirana yemhando bvunzo) uye yakajairwa miganhu pane huwandu hwevatengi. Maitiro ekugadziriswa kwecaptcha kuburitsa.
Wakawedzera sarudzo yekudzima kurekodha.
Basa rakaitwa rekuvandudza kudzikama kweaudio uye vhidhiyo kutumira.
Iyo yekushandisa interface yekuratidzira zviziviso inoshandisa iyo webhu ziviso API, iyo inokutendera iwe kushandisa system masisitimu kuratidza zviziviso pane desktop.
Shanduro dzakagadziridzwa muchimiro chekutumira kukoka, nguva yemushandisi inoratidzwa.
Wakawedzera kugona kumisikidza uye kugadzirisa saizi yemavhidhiyo anovharira evatori vechikamu vemusangano.
Fomu rekukoka rinoratidza iyo nguva munzvimbo yemutengi
Saizi yemavhidhiyo pods inogona kugadziriswa uye inogadziriswa pamushandisi
Captcha ikozvino inogadzirisika
Ungawana sei Apache OpenMeetings 6.0?
Chekupedzisira, kune avo vanofarira kugona kuwana iyi nyowani vhezheni, unogona kuenda kune webhusaiti yepamutemo yeprojekti uye muchikamu chayo chekurodha pasi unogona kuwana mabhinari mapakeji, pamwe nekodhi yekuumbwa kwavo kana zvakare mufananidzo weDocker watogadzirirwa.
Zvakare, iwe unogona kuteedzera rairo dzakatsanangurwa mune iyi link, kwaunongofanira kurodha pasi yazvino yakagadzika pasuru yekushandisa, tambanudza uye unomhanya bhanari kutanga iyo webhu yekuisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo nyowani vhezheni yeApache OpenMeetings 6.0 web conferencing server yakaburitswa
FSF Inozivisa Vanokunda veGore Negore Mubairo weMipiro kune Yemahara Software Kuvandudza